Nin walba calanka dadkiisa lagu laayo wuu nici kara. « CEELBARDAALENEWS.COM
« Awdal wax hanti ah waxay heysteen nabadda oo kaliya.
Jawaab ku socota ururka Ingineerada Awdal & Salal baaqoodii »
Nin walba calanka dadkiisa lagu laayo wuu nici kara.
July 23,2009.Marka hore inta, aanan u gudbin ujeedadada maqaalka waxan jeclahay in aan in yar oo waana ah usoo jeediyo reer Awdal waxanan leehay reer Awdaloow dilka afarta nin ee jidka loo galay waa kuday la idinku dayayo hadaan maanta laga dhiidhiyina waxay noqon doontaa wax caadiya hadeed.
Mida kale waa in reer Awdaloow aad ogaataan in go’aanadii guurti ku sheegu soo saareene aanay ahayn qaar sharci ahaa oo aanay jirin cid golaha guurtida hordhigtay oo u footaysay ama maxkamad sare oo soo xukuntay in la fuliyo, isla markaan aanay dawladu fulin karaynin, oo aanay awood sharciyeed ooy ku fuliso u lahayn.
Hadaan u sii gudbo ujeedada aan qalinka iyo warqada uqaatay..
Waxa dhab ah in ay abiidaba dhici jirtay dad budhcad ahi in ay dariiqyada istaagaan oo ay wax dhacaan waxana laayaan dabadeedna waa la soo qabanjiray sharcigaana la horkeeni jiray.
Laakiin waxa inagu cusub iyada oo dhulku nabad yahay dagaalana aanay jirin dawladina jirto in dad dariiqa maraya laqaqabto oo loo laayo hayb qabiil dabadeedna wixii layaayay la soo qabanwaayo
Waxa iyadna inagu cusub madax dhaqameedyo iyo culumo awdiin xigmadii ka luntay oo ay qabayaaladii xigmadii iyo xurmadii ay lahaayeen ka lumisay.
Waxa kale oo aan wada ogsoonahay intabadan cidii kasoo jeeda reer sheikh Isaxaaq ee ka hadasha arinkan fooshaxumi in ay daba dhigayaan amaba qaarkood ka horaysiinayaan arimo aad u jilicisan amaba kuwo aan haba yaraatee lug ku lahayn dadka la laayay.
Tusaale ahaan waxajira dad badan oo iska dhigaya in ay muslaxad ka shaqaynayaan amaba iska matalaya in ay muslaxada iyo cadaalad jecelyihiin oo kasoo jeeda reerka reer Sheekh Isaxaaq oo hadana markay hadlaan ka hadlaya CALAN BAA BOORAMA LAGA TAAGAY. Qaarkoodna si munaafaqadi ku jirto ayay kadhigayaanba arinka raga lagu laayay mid ka mida oo la xidhiidha waxayalaha ka dhacaya Ceelbardaale.
Tusaale kamida hadaan idiin soo qaato waxa jira odayaal Sacad Muusa ah oo shir-jaraaâ€™id ku qabtay HARGEISA oo ka hadlaya waxa dhacay waxanan jecelahay in la ila akhristo waxayaalahay ka hadleen odayaashu. Kuwana waa tusaale uune waa wax ay inta badan ka simanyihiin reer Sheekh Isaxaaq mucaarid iyo muxaafidba. Bal ila akhrista tusaalaha ( Waar niman yohow, waxa iga yaabiyay calankan sii tolan ee hoosta lagu haysto” Qaar ka Mid Ah Odayaasha Beesha Sacad Muuse )
Ninamkaa waa wayni waxay ka cabanayaan calanka Somaliya oo Boorama lagu dhex qaatay waxayna ku doodayaan in calankaa Somaliya dadbadani kaga hoosdhintay.
Hadaba su’aasha meesha taala waxay tahay ninka maanta calanka Soomaliland ee Borama ka taagan uu ninkiisii ku hoos dhintay ee waliba loo soo qaban waayay miyaanu xaq ulahayn in uu ka xanaaqo calankaa Somaliland?
Waxan kamid ahay dadka Somaliland run ahaantii aadka u aaminsanaa ee waliba sida dhabta ah u aaminsanaa in ay Somaliland dhamaanteen dan inoo wada tahay waxanan aminsanaa in Xamar aanay waxba Awdal kaga xidhnayn. Waxanan aad u aaminsanaa in marka qalad dhaco ayjiraan dad isqaban kara. Waligayna ma aan aaminsanayn in dadku diintii iyo dhaqankiiba ka guureen ama ay siyaasadeeyeen
Shaqsiyana waxan aad uga xumahay in maanta shaki xooglihi iga galo waxa ay Soomaliland u taagantahay, iyo waliba in diin iyo cadaalnimadii ay Somali mar kaliya kawada dhamaatay, oo maanta arimaha Somaliland ka socdaayi waxaba kama duwana kuwa koonfurta Somaliya ka dhacaya. Waxana wanaagsan in la ogaado nin walba calanka uu nabad ku hoos waayo in uu ka hoos cararayo
Hadab dadka reer Awdal waa in ay iswaydiiyaan maadaaba oo iyaga oo dad laga laayay maanta lagu haysto calan nalagu laayay ayaad sida taan in ay iyaguna iswaydiiyaan sobobta calanka Somaliland ee ragoodii lagu laayay uu Boorama u sudhanyahay?
Maanta waxan aaminsanahay waxa dhacay hadaan laga hortagin oo aanay reer Awdal ragooda haybta lagu laayay ka dhiidhiyin oo ay ka sii mid noqdaan Somaliland iyaga oo og ragii raga laayay iyo kuwii amrayba in ay dalka la wadaagayaan in ay noqon doonaan xoolaha la dhaqdo ee haragooda iyo helibkoodu dartood loo gawracdo.
Waa in aan xasuusanaa in raga la laayay ee la gawrgawracay aanay cidna wax ka dhicin. Oo aan waliba ogaanaa in nimanka wax laayay ee raga gawrgawracay aanay diin waxba ka galin iyagoo waliba xer ah oo raga amarka bixiyay ay sitaan titlka AW HEBEL.
Hadaba waxan aaminsanahay in aynaan waxba la wadaagi karayn Reer Sheekh Isaxaaq inta ay ku jiraan dad sidaas ahi, sobobtoo ah dee waxan noqonaynaa xoolo markii la doonana la gowraco markii la doonana la dhaqdo.
Markaa talo ayaa loo baahanyahay oo waxa loo baahanyahay in aynu is xorayno inteena wali nooli intanan la ina gowrgowricin. Mida kale waxay reer Sheekh Isaqaaq Xamar udiideeni waxay ahayd cabsi ay ka qabaan cadaalad xumo iyo in la laayo oo waxay ku doodayaan waa lana xasuuqay laakiin garaad koodu wuxu siiyay in ay dadkale iska laayaan, waana dhaqankii yuhuuda aan uga barannay kaasi. Markay heerkaa waxa marayaana maaha mid hadal uun u baahan ee waa in la tashado oo la is xoreeyaa.
Is xorayskuna waa badanyahay siyaabo badana waa la isku xorayn karaa laakiin waa in xoraynteena ay ugu horayso in aynu ka tashano wixii Somaliland aan ka yeeli lahayn iyo meesha aan iska taagayno.
Waar hadaan garaad ku tashanwaynay bal aan cabsi ku tashano oo ha isku keen keento cabsiyi.
Waxa kale oon ku buurinayaa gaar ahaan reerihii wax laga laayay in ay uguntadaan sidii ay inamadoodii ugu heli lahaayeen wax JUSTICE ah siduu doonaba ha ku yimaadee
This entry was posted on July 23, 2009 at 5:15 pm	and is filed under 1. Tagged: 1. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.